Mucjisada Qaaliga ah ee Dareenka ah ee iibsashada Gubasho Cusub cusub? In Cornwall? Mahad waxaa ku caawin kara
Home > Kuleylka iyo kuleyliyaha > Qoryaha geedaha
Qoryaha shidaalka leh ee shidaalka leh waa mid aad u weyn gurigaaga. Qoryaha alwaaxda cusub ayaa ah kuwo aad waxtar u leh waxana ay kululaan karaan meelo badan oo guriga ah oo qiimo macquul ah.
Waxaa jira sababo badan oo loo dooran karo gubasho gubasho gurigaaga.
Qoryaha waa shidaalka dib loo cusboonaysiin karo oo si ka badan bay'ad uula dhaqmaa marka loo eego shidaalka kale.
Qoryaha geedaha waxay ku haboon yihiin guryaha la'aantiis iyada oo adoo xiraya nidaamka tuubooyinka.
Tiknoolajiyada nadiifinta hawada cusub ee cusbada cusub macnaheedu waa dabka buuxa ayaa laga heli karaa dabka iyada oo aan la galin cadad qadhaadh leh.
Nalalka cusub waxay leeyihiin nadiifinta tiknoolajiyada. Tani waa marka hawada diiran soo gasho dabka ka sarreeya heerkulka caadiga ah ee dabka, taas oo u oggolaanaysa gubista hydrocarbons-ka aan qallafsanayn qiiqa. Tani waxay abuurtaa 'gubasho nadiif' ah oo kuleylka kuleylka loo sii daayo halkii laga sii wadi lahaa qiiqa.
In lala shaqeeyo Euroheat, Energy Energy waxay bixisaa noocyo kala duwan oo casri ah, dabiici ah oo qoryo gubanaya. Baadi xadka halkan.
Sida loo doorto guriga gubta gurigaaga
Waa noocee shidaalka aad rabto inaad isticmaasho?
Miyaad isticmaali doontaa shidaal badan ama qoryo kaliya. Tani waxay go'aamin doontaa nooca gubta aad iibsato.
Ma rabtaa cunto kariye kuleylka kuleylka dhexe ama biyaha kulul?
Haddii aad iibsato kariyaha kuleyliyaha, waxaa suurtagal ah in aad tan u isticmaasho kuleylkaaga kuleylka. Makiinada kuleylka waxay kululeyn doontaa biyahaaga kaas oo lagu quudin doono radiatayaashaada. Waxaa ugu wanaagsan in la helo mid ka mid ah injineeriyalladeena kuleyliyaha si aan ugula talinno qiyaasta mashiinka loo baahan yahay.
Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso waxaay dooraneysaa habka saxda ah ee adiga kugu habboon!
Maxay u dooranaysaa Tamarta Tamarta?
Waxaan kugula talin doonnaa xalalka tamarta kulul ee guud ee gurigaaga.
Waxaan ku siin doonaa siyaabo kala duwan oo aad adigu u doorato foomka.
Dhammaan rakibayaasheenna waa HETAS diiwaan gashan si loo hubiyo rakibidda tayada ugu fiican.